LALELA: Namuhla sikhumbula iBhova likaDikadika | News24
LALELA: Namuhla sikhumbula iBhova likaDikadika
eThekwini - Namuhla sikhumbula elinye lamaqhawe kaMaskandi uKhulekani Mgqumeni Khumalo owazakhela olukhulu udumo ngokushaya ingoma.
UMgqumeni, wangena emculweni eshaya esigcinci eneminyaka eyisikhombisa futhi ewuthanda umculo kaMaskandi.
Ungomunye wabaculi abahlonishwa kakhulu emculweni kaMaskandi ngamagalelo akhe okushaya ingoma kanye nokusebenzisana namaqembu ahlukahlukene./gomunye wabaculi abahlonishwa kakhulu emculweni kaMaskandi kanti umsebenzi wakhe usahlonishwa namanje njengoba bebaningi abaculi abasadlala ushini wakhe.
Lo mculi odabuka eNquthu wangena kule mboni wasebenzisana namaqembu amaningi okubalwa kuwo Amatshitshi Amhlophe, Ubuhle Begubasi kanye noMlamu Wami nokungamaqembu ayephethwe ngumalume wakhe uMahawukele.
OLUNYE UDABA:Abasoze bamkhohlwa uMgqumeni
UMgqumeni wayenomlando omuhle kakhulu emculweni kaMaskandi abaningi bemthatha njengeNkosi yalo mculo ngenxa yemisebenzi yakhe emihle.
Lo mculi wakhipha icwecwe lakhe eyedwa, Easy Come Easy Go ngo-2003 nokuyinto eyamakhela olukhulu udumo kanye nokuhlonishwa kule mboni.
I-albhamu yakhe, iMagic, yadayisa amakhophi angu-78000 ngenyanga yokuqala ikhishiwe. Maningi ama-albhamu awakhipha futhi wonke amnandi futhi asezingeni eliphezulu kakhulu.
Baningi abathandi bomculo kaMaskandi abangavumelana ngelithi, kuhamba emhlabeni kwaleli qhawe, kuvule isikhala esikhulu futhi okunzima ukuthi sivaleke kule mboni, babodwa abazamayo ukuwubamba ushuni wakhe kodwa, kusekude phambili.
Ibhova likadikadika umuntu ekhathele ebuya okhuleni
Thambo lembongolo endala emnyama enedlebe elodwa eyabhongel kweyaseeMangunini yenama
Imhlambi yentwala egcwele emakhanda onyoko ngithe zicophe sosha vele imsebenzi yakho
Uwena owangihlebelela wakhohlwa ukungigqiba maqede ngabikela izwe wonda wena womela othini njengentethe..
Udlula bedlal impisi engena mngane
Isembula mbhede kuvele amahlazo
Khanda elikhulu lehlula amawisa wakwabo kwaKhumalo
Nduku ayikhulumi ingenamlomo
Muntu akundundubali engekhamba
Lomfana omfishane ongangemkhovu yakwaNtombela eNkandla